Hambaalee Itoophiyaa loltotaan saamaman UK Itoophiyaaf ergisuufi - BBC News Afaan Oromoo
Hambaalee Itoophiyaa loltotaan saamaman UK Itoophiyaaf ergisuufi
Madda suuraa, V&A Museum
Gonfoon kuni bareedina dizaayinii isaaf jaalatama
Muuziyeemin Viktoriyaafi Albert Yunaayitid Kingidamitti argamu hambaalee durii loltoota Biritishiin waggaa 150 dura fudhatamanii turan Itoophiyaaf ergisuufi.
Hambaaleen kuni gonfoo, uffata cidhaa fi meeshaa dhugaatii itti dhugan fa'i.
Yaadi kuni kan dhufe injifannoo bara 1868 Maqadallaatti raawwate yaadachuufi. Kana sababeeffachuunis hambaaleen kuni muuziyemii Landaniitti argamutti hanga Waxabajjii 2019'tti ni agarsiifamu.
Akka namoonni seenaa jedhanitti, meeshaalee baras waraana irratti saamaman Maqdalaa irraa gara Ingilizii geessuuf arba 15 fi gaangee 200 fayyadamaniiru.
Uffati cidhaa kuni bara 1860 keessa kan hojjetameefi kan Giftii Aadde Xurunash jedhama
Meeshaalee hambaa doolaara miiliyoona hedduu baasan akka deebi'uf Itoophiyaan bara 2008'tti dhaabbilee Biritish hedduuf dhiheessite turte.
Daarektarri muuziyeemii Viktoriyaa fi Albert (V&A) Tiristiraam Haant hambaaleen kunneen qabeenya muuziyemichaa ta'ani akka turan himani; haa ta'u malee, ''ergisaa yeroo dheeraaf turun'' bakka dhufanitti erguu dandeenya jedhaniiru.
Maqdallaa bara 1868
Walakkeessa jaarraa 19ffaa irratti mootichi Tewodiros UK waliin walitti dhufun impaayera isaanii Abisiniyaa ammayyeessuu yaadan
Deeggarsi waraanaa gaafatan erga dhabani booda walitti dhufeenyi isaanii toluu dide
Sababa kanaan mootichi lammiilee biyya alaa biroofi bakka bu'aa Biritish hidhan
Biriteen immoo waraana gara Maqdallaattie ergite
Hidhamuurra mootichi Tewodiros of ajjeese
Ergasi booda jarri Biritish barreeffamoota, gonfoowwan, fannoowwan, akkasumas hambaalee amantii fi waraanaa akkasumas kaan fudhatan
Ilmi dhiiraa mootichaa gara Biriteen fudhatame mana barumsaa Raagbiittis akka baratu ta'e
Ilmi mootichaa umurii isaa 18'tti dhukkubsate du'e jennaan Windsoritti awwaalame - mootummaan Itoophiyaa reeffi isaa akka biyyatti deebi'u gaafate ture
Yunaayitid Kingidam gonfoo fi meeshaa ittin dhugamu warqii irraa hojjetame muuziyeemi Viktoriyaafi Albertitti bara 1872 ol kaa'e
Hambaaleen Maqdallaa kaan boodarra muuziyemichatti seenan kennaa namoota dhuunfaafi kan bitamani dha
Obbo Haant gaazexaa Art jedhamuutti akka dubbatanitti, ambaasaaddara Itoophiyaa Landaniitti argamuf affeerraan taasifameera. Agarsiisnis gaafa Kamisaa banama jedhameera.
Agarsiisa kana irratti meeshaaleen harkaan mukaafi sibila irraa hojjetaman ni dhihaatu.
Faaya mormaa kan mootitti Xurunash fi meeshaa warqiirraa hojjetameefi ittin dhugamu ni dhihaatu
Dabalataanis, agarsiisichi fakkeenya suura waraanaa durii UK keessa ture agarsiisa jedhu qaamoleen qophiicha qopheessan. Akka muuziyeemichi jedhutti, agarsiisichi fakkeenya suraawwan loltummaa durii muraasa kan qabaatu yoo ta'u, kunis gaazexessummaa suuraa kaasuu jaarraa qaromummaatiif bu'uura tures jedhameera.
Kuusaa suuraa, “Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra”
Agarsiisni suuraa yeroo jalqabaaf haala teessuma lafaafi qabeenya tuurizimii akkasumas aadaa naannoon Oromiyaa qabdu irratti xiyyeefate giddugala aadaa Oromootti agarsiifameera. Agarsiisni ogeessa suuraafi daayreektara viidiyoo sirbaa Amansiisaa Ifaatiin qophaa’ee kun, hanga jala bultii ayyaana Irreechaa 2017tti agarsiifamee ture. “Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra.” jechuun ogeessi suuraa kun BBCtti himeera. Filannoo isaatin suuraawwan agarsiisaaf dhiyaatan keessaa kanneen isinii dhiheessineerra.
Haadha ijoollee afurii ilma isaanii dorgomanii yunivarsiitii seenan
26 Caamsaa 2022
Dargaggeessaa kennaa guuyyaa dhalootaaf bitameen daa'ima 19fi barsiistota 2 ajjeese
Gaazexeessaa Tamasgan Dassaalany to'atame
Dhiironni dhaabbii qaamaa hawwataa barbaacha dhala malee hafu
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Caamsaa 2019
Intala abbaan ishee hidhamuu isaatiin seera baratte
Dubartiin daa’ima guddifachaan fudhatte ajjeefte hidhaa ganna 18’n adabamte
Loltoonni Raashiyaafi Yukireen daandii ijoo to’achuuf lola cimaatti jiru
Hogganaan Baankii Addunyaa dinagdeen addunyaa kufuu akka malu akeekkachiisan